Sheekh Shariif oo la kulmay Safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya. – STAR FM SOMALIA
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna Musharrax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa maanta la kulmay Safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Harriet Mathews, kulankan ayaa ka dhacay Dhismaha Safaaradda Ingiriiska ku leedahay Xerada Xalane, halkaasoo Sheekh Shariif ugu tagay Safiiradda.
Labada dhinac ayaa ka hadlay xaalada Soomaaliya, iyo marxalada kala guurka ah ee la galay, waxaana waxyaabaha gaarka ah ee ay isla qaadeen ka mid ahaa doorashada dhowaan lagu wado in dalka uu ka dhaco.
Harriet Mathews ayaa uga mahad celisay Sheekh Shariif inuu ku soo booqdo Xarunta Safaaradda Ingiriiska, waxaana ay uga warbixisay sida dowladeeda uga go’an tahay taageerida Soomaaliya.
Sheekh Shariif ayaa ammaanay doorka dowladda Ingiriiska ku leedahay taageerida Soomaaliya, waxaana uu uga mahad celisay sida dhow ee dowladda Ingiriiska u garab istaagneyd dowladdii KMG aheyd ee uu hoggaaminayay.
Musharrax Sheekh Shariif ayaa wada la kulanka Safiirada Ajnabiga ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu muddooyinkan waday dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo gudaha dalka iyo dibadaba.
Waqtiga lagu balamay soo gudbinta xubnaha aqalka sare oo maanta ku eg